Wejiga Shaydanka Wayn ahna madaxa dad qalatada J/abokor ee Muxumed Raage « CEELBARDAALENEWS.COM
« war deg deg ah dagaal ka dhacay Teebaha oo u dhaxaysa Seemaal iyo Baysaare
Ceelbardale problem was settled by late Egal Let us leave it at that »
Wejiga shaydanka wayn ee aabihii kasoo guuray dalka amxaarada si uu dhulka u boobe degaanka Gebilay ayaa dad badan aan ku cusbayn. Naxliga ka muuqda dushiisa ayaad ka araagtaa inuu yahay nin cimrigiisa ku dhamaystay xaaraan cunka iyo hanti boobka isagoo kaashaday taliskii Siyad Bare.
Muxumed Raage oo ah ninka ay wararku sheegeen inuu gacantiisa ku gawracay shacabkii wadada u dhexaysa Hargeysa iyo Borame socodka ku marayey. Hadaba xukuumada Dahir Rayale ayaa ku guul darasatay inay gacanta ku dhigto gacan ku dhiiglahan Muxumed Raage iyo shiftada jidka ku gumaaday socotada aan hubaysnay.
Anigu waxaan ahay shakhsi ka mid ah umada wayn ee reer galbeed markaa waxaan soo jeedinayaa in shacabku FATWA ku waajibiyo dhiigyo cabkan Shaydan Muxumed Raage iyo taliye ku sheega ciidanka ee TANI, iyo dhamaan list gacan ku dhiiglayaasha falkii gaystay degaanka Gebilay ee lagu dilay afarta qof ee aan hubaysnayn.
Tani oo la sheegay inuu jaad u geeyey shiftada maydka ragii la dilay haysatay isagoo gabay xilkii umada uu u hayey kana doortay mid qabiil.
Waxaan aaminsanahay in madaxa shaydan Muxumed Raage uu xalaal u yahay shacabkii iyo qaraabadii laga dilay 4 afarta nin oo shaydankan wayn la hor keeno maxkamad iyo markhaatiyaashii ka badbaaday dilkii fulaynimo ee ka dhacay wadada Hargeysa bisha Luulyo 11-keedii.
Marhadii xukuumadu codka shaydan Muxumed Raage ka dooratay in cadaalada la horkeeno dilaagan wayn oo in badan falal argagixiso ka gaysanay degaanka Gebilay isagoo runtii dalka ku joogo ogolaansho la’aan qaxootinimo.
Maxamed Cabdi Jamac
Gebiley, Waqooyi Galbeed
This entry was posted on August 27, 2009 at 4:40 pm	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.